24 qofood oo ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Sool * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
24 qofood oo ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Sool
By MAREEG	 On Jun 6, 2016
24 qof ayaa dhimatay ku dhowaad 30 kalana dhaawac ayaa kasoo gaarey dagaal beeleed 3 dii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayey deegaano dhaca Koonfurta gobolka Sool.
Dagaalladan ayaa ka dhacay Dharkayn-Geenyo, Dhumay iyo baadiye hoos yimaadda tuulooyinkaasi.
Kumanaan qoys ayaa sidoo kale ku barakacay dagaalo beeleedkan waxaana maleeshiyaadka dagaalamaya kala dhex fariistay ciidamo Somaliland ah oo kasoo kicitimay Laascaanood.
Axmed Sheekh oo ku sugan magaaladda Dharkayn ayaa Radio muqdisho u sheegay in dagaalladaasi ay saameyn ku yeesheen dolosha dadka ku dhaqan deegaanada ay colaaddu ka taagantahay.
Maxamed Cali Bile Buuhoodle